Chọgharịa ndị ọzọ ngwaahịa - Nantong ndanda Machinery Co., Ltd
Home » Product » Honda mmanụ ụgbọala engine
Chọgharịa ndị ọzọ ngwaahịa
Honda amalite na 1948 na-emepụta ígwè engine ike, bụworo "nrọ" dị ka a na-akwọ ụgbọala ike "nnweta" n'ụdị mmadụ na ọha mmadụ na-anọgide na-enye a wider nso nke mobile omenala.
"Nkwanye Ùgwù maka iche", mkpa nke onye ọ bụla \_ 's àgwà, otú ikwe na Honda kpụrụ a na-akwanyere ùgwù okike mkpara, irutụrụ free enterprise omenala. ugbu a, Honda aghọwo ihe si obere engines, ọgba tum tum na pedal ụgbọ ala, na ndị ọzọ na ubi nwere mbụ technology, ma nọgide na mmepe, mmepụta nke ọhụrụ ngwaahịa ụlọ ọrụ.
Anwa anwa site na mmalite, Honda anọwo na a "ahịa afọ ojuju n'ihi na ike nke ụwa," echiche nke mgbe niile na-emeghe ha na-akpata.
"Olee otú ndị obodo ahịa afọ ojuju" dị ka nzube ya, ọ bụghị nanị na-enye na nguzobe nke obodo ngwaahịa na ọrụ a sara mbara sales netwọk, nwekwara ike a mpaghara mmepụta na nnyocha na mmepe nke ọhụrụ ngwaahịa ka usoro.
Ugbu a, iche site na Japan, Honda 29 mba ụwa na ihe karịrị 120 mmepụta bases, site ọgba tum tum, ụgbọ ala na ọnyà ngwaahịa, onye ọ bụla nke patrons, dị ka ọtụtụ ndị dị ka 17 nde ndị ọzọ.
N'otu oge ahụ, Honda Umuihe ifịk ifịk-arụ dị ka ụlọọrụ amaala nke na-elekọta mmadụ ọrụ, na ifịk ifịk inyocha gburugburu ebe obibi-echebe ma na nche ngwọta.
Global nsogbu gburugburu ebe obibi na taa \_ 's esiwanye a ma ama, Honda na ngwaahịa mmepe, mmepụta na ahịa dị iche iche na-azụ ahịa-eme mgbalị iji dozie ikuku ndu ma belata CO2 anwuru, na oru oma eji ego na ike okwu ndị dị ka iji nweta ihe emission ihicha ngwaahịa, Belata mmanụ ụgbọala oriri, mmepụta akara, "Green Factory" na nakweere a usoro nke jikoro iji belata mmetụta na Earth \_ 's gburugburu ebe obibi mere ka mma onyinye. Maka ndokwa nke mobile omenala Nsukka, Honda bụghị naanị tụlee arụ ọrụ na-atụle nchekwa nke pedestrians, na-emepụta ihe ndị ọzọ nche ngwaahịa. N'otu oge ahụ, ifịk ifịk isonye na mma ịnya ụgbọ, na ndị ọzọ na outreach eme iji dozie nsogbu nke iga usoro, na-ewu ọzọ ọgaranya mobile otu, na-eme ka unremitting mgbalị.
OHV kwụ aro
V-Ejima OHV kwụ aro